ဆြာသူရဿဝါ၏ အိုင်တီတဲရော့ အချစ်ဗေဒင်ဟောစာတမ်းကြီး
“ဆြာသူရဿဝါ၏ အိုင်တီတဲရော့ အချစ်ဗေဒင်ဟောစာတမ်းကြီး”
ကျွန်ုပ် ဗေဒကဝိ ပညာရှိ ဆြာသူရဿဝါ သည်ကား အမျိုးမျိုး အစုံစုံ အဖုံဖုံသော ဗေဒင်တွက်နည်း များဖြင့် တွက်ချက် သမှု ပြုရခြင်း အလုပ်တွင် ငြီးငွေ့လာသည် ဖြစ်သည်နှင့် အညီ နိုင်ငံရပ်ခြား သိုးဆောင်းသားတို့ ဗေဒင် ကဝိ တွက်ချက် ဘိသည့် ဖဲချပ်အလား တဲရော့ကဒ်များကို ကိုယ့်နည်းကိုယ့်ဟန်ဖြင့် တီထွင်ဖန်တီး အသုံးပြုရန် အလို့ငှာ စိတ်အကြံ ရလေသည်။ အထူးသဖြင့် Net Guide ဂျာနယ်၏ စာဖတ် ပရိသတ်များ ဖတ်ရှု လေ့လာ ကြမည် ဖြစ်သဖြင့် ခေတ်မှီ ဆန်းပြားစွာသော အိုင်တီ တဲရော့ကဒ်များ အနေဖြင့် အထူးတလည် ဟောကြား လိုက်ရပေသည်။ ချစ်စွာသော စာဖတ်သူတို့ အနေနှင့် Your Freedom, Hacker, Touch Screen, CD-DVD Rom, Virus, UPS, Connection ဟူသော ကဒ်ကြီး ၇ ချပ်ကို ယူငင်ကိုင်ဆကာ မျက်လုံးမှိတ် နံကြားထောက်ပြီး အံကြိတ်၍ အိုင်တီ တဲရော့ကဒ် တစ်ကဒ်ကို ရွေးချယ် ပါလေ။ သင်ရွေးချယ်မိသော ကဒ်မှာ Your Freedom ဖြစ်သည် ရှိအံ့။ ၄င်း Your Freedom သည် ပိတ်ထားသော .. ဖွင့်မရသော Website များကို ဖွင့်ရန် အလို့ငှာ ကျော်သည့် ခွသည့် အဓိပ္ပါယ်ကို ဆောင်လေသဖြင့် သင့်အား သူငယ် နှပ်စား သဖွယ် သဘောထားကာ အမျိုးစုံ ကြိုးခုန်မည့် ချစ်သူရည်းစားမျိုးနှင့် ဆုံရမည် ဟူသော ဟောကိန့်း ထွက်လေ၏။ သင့်အား ဘက်ဖက်က လှိမ့်လိုက်၊ ညာဖက်က ပတ်လိုက်နှင့် အလွန့်အလွန် ဥာဏ်နီ ဥာဏ်နက် များမည် ဖြစ်လေရာ သင့်အနေနှင့် သတိကြီးကြီး ထား၍ ဆက်ဆံရမည် ဖြစ်သော ဟူ၏။
သင်ရွေးချယ်မိသော ကဒ်မှာ Hacker ဖြစ်သည် ရှိအံ့။ ၄င်းသည် သင်တို့ သိထားပြီး ဖြစ်သည့်အတိုင်း ခိုးယူ ဖောက်ထွင်းခြင်း သဘောကို ဆောင်လေ သဖြင့် သင်သည် ကောင်းကောင်းကြီး အနှပ်ခံရပေအံ့။ သင်၏ ချစ်သူ ဖြစ်လာ လတ္တံ့သော ကြင်ဖော်သည် သင့်အား ညာတာပါတေး မလိမ့်တပတ်ဖြင့် သင်၏ ရှိရှိသမျှ အိတ်ကတ်များ အတွင်းမှ အဖိုးတန် ပစ္စည်းများအား Hacking လုပ်ချေမည် ဖြစ်လေရာ သင့်အနေနှင့် လက်ထိပ်တစ်ကွင်း အဆင်သင့် ဆောင်ထား၍ ၄င်းအား ဆက်ဆံပေါင်းသင်း ရမည်ဖြစ်သည်ဟု အဟောထွက်၏။
သင်ရွေးချယ်မိသော ကဒ်မှာ Touch Screen ဖြစ်သည် ရှိအံ့။ Touch Screen တို့၏ သဘော သဘာဝမှာ နှိပ်စရာ ခလုပ် မပါရှိဘဲ လက်မ သို့မဟုတ် လက်ညှိုးတို့ဖြင့် ပွတ်မှသာ အလုပ် လုပ်သည် ဖြစ်သဖြင့် သင်ကြုံတွေ့ရမည့် ချစ်သူ ရည်းစားမှာ နှိပ်စရာ ခလုပ် မပါရှိဘဲ လက်မ လက်ညှိုးတို့ဖြင့် ပွတ်မှသာ အလုပ် လုပ်သည် ဖြစ်သဖြင့် … (အလို .. ဘယ်လိုကြီး ပါလိမ့် … ပြန်ပြင် ဟောမှပဲ) သင်ကြုံတွေ့ရမည့် ချစ်သူ ရည်းစားမှာ သင့်အနားတွင် ပွတ်သီးပွတ်သတ်ဖြင့် ကြောင်လေး တစ်ကောင်ကဲ့သို့ ချွဲနွဲ့နေထိုင် ရသည်ကို နှစ်သက်သူ ဖြစ်ပေ၏။ သင်၏ ကြင်နာ ယုယမှုကို သဘောကျ၍ သင့်အား အလွန်တရာ ချစ်ခင်သူ ဖြစ်မည် ဆိုသော်လည်း သင်သည် အလွန်တရာ အလုပ်ရှုပ်မည့် အရေးပင် ဖြစ်သည်ဟု ကြိုတင်၍ သတိပေး ရပေသည်။
အခုကပြန်စမယ် . . .
ပေါလစ်ပြန်တင်မယ် ၊ ပတ်တီးကိုင်မယ်
ဆေးရောင်လှလှခြယ်ရအောင် . . .
အစိမ်းရောင် ။ ။
(နိုဝင်ဘာလ ၁၉ တုန်းက AGMP ကဗျာဆရာများက “သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိမ်းသိမ်းရေး” ကို ရည်ရွယ် ပြုလုပ်တဲ့ Green Poetry Workshop မှာ ရွတ်ဆိုဆွေးနွေးဖြစ်တဲ့ ကဗျာဖြစ်ပါတယ်)
နိုဝင်ဘာ ၁၉ ၊ ၂၀၁၁ ခုနှစ်
သူရဿဝါနှင့် အိုင်တီသမား ဈေးရောင်းစားတော့ ….
“သူရဿဝါနှင့် အိုင်တီသမား ဈေးရောင်းစားတော့ ….”
ဆယ်နှစ်ကျော်ကြာ ကျင်းပခွင့် မပြုခဲ့သော ပုဇွန်တောင် ရေကျော် သီတင်းကျွတ် ပွဲဈေးတန်းကို ပြန်လည် ကျင်းပခွင့် ပြုလိုက်သည်။ ဒီနှစ် သီတင်းကျွတ်မှာ အိုင်တီသမားများ ဈေးရောင်း စားကြမည်။ M51A ခေါင်းဆောင်ကြီး ကိုတင်ထွန်းလွင်၊ စုဘူးဖန်ကလပ် ဥက္ကဌ ကိုစိုင်းနောင်နှင့် စာရေးဆရာကလေး ကိုသူရဿဝါတို့ ဆိုင်ခန်းနေရာ ယူ၍ ရေကျော် သီတင်းကျွတ် ပွဲတော်တွင် ဈေးရောင်းရန် ကြံစည် ကြသည်။ ဘာရောင်းကြမလဲ .. တိုင်ပင်ကြသည်။ ဘီယာ ရောင်းကြမည်။ ဟုတ်ပြီ … စပ်တူ ရှယ်ယာထည့် လိုက်ကြသည်။ တစ်ယောက် သုံးသိန်း အရင်းဆိုတော့ သုံးယောက်ဆို ကိုးသိန်းပေါ့။ စိုးရိမ်တတ်သော သူရဿဝါက မေးမိသည်။ “ကိုထွန်း … ပွဲဈေး လေးရက်ထဲနဲ့ ကိုးသိန်းဖိုး ကျော်အောင် ပြန်ရောင်းရ ပါ့မလား” … ဆိုတော့ ကိုတင်ထွန်းလွင်က ရယ်သည်။ ပြီးတော့မှ … “ဒီမယ် .. ဝါဝါ .. မှတ်ထား … ပထမရက် သိပ်ရောင်းရမှာ မဟုတ်ဘူး … နည်းနည်း စိတ်ညစ်ရမယ်၊ စိတ်မပူနဲ့ .. ဒုတိယရက် .. နည်းနည်းပျော်ရမယ်၊ တတိယရက် … ဒီထက် ပိုပျော်လာရမယ် .. နောက်ဆုံးရက် … ပျော်လွန်းလို့ ထပါကရမယ် .. ဟဲဟဲ” တဲ့။ သူရဿဝါ ထိုစကားလေးကို အလွန် သဘောကျ သွားသည်။ သူရဿဝါက ဈေးရောင်းမည့် ပွဲရက် လေးရက်မှာ နှစ်ရက်က နယ်မှာ အငြိမ့် သွားကရမယ် ဆိုတော့ တစ်ရက် တစ်သောင်းနှုန်းဖြင့် နှစ်ရက်စာ နှစ်သောင်း အဖြတ်ခံ ရမည်တဲ့။ သြော် … ရောင်းတောင် မရောင်းရသေး .. ရှုံးနှင့်နေသော ဘဝ။ သုံးယောက်ပေါင်း လိုက်တော့ ကံဇာတာက အမြင့်ကြီး ဖြစ်သွားသည်။ ဒီနေ့ သုံးသိန်းစီ စုလိုက်ပြီး နောက်နေ့ ရောက်တော့ ဘီယာ ရောင်းခွင့် ပါမစ်က လုံးဝမရတော့၊ အပိတ်ခံလိုက်ရသည်။ ဘီယာရောင်းဖို့ ပြင်ဆင် ထားရသည့် စရိတ်စကတွေ သဲထဲရေသွန်။ အကုန်လုံး ထူပူ ကုန်ကြသည်။ အင်းလေ … မထူးတော့ဘူး။ ဘီယာ မဟုတ်လည်း မရ ရတာတော့ ရောင်းရတော့မှာပဲ။ နောက်ဆုံး … ယိုးဒယားကင်၊ ဝက်သားတုတ်ထိုး စသည်ဖြင့် ရောင်းကြဖို့ သဘောတူ လိုက်ကြသည်။ သဘောတူပြီး နောက်တစ်နေ့ ဆိုင်ခန်းလေး ဆောက်ဖို့ ကိုထွန်းအိမ် ရောက်သွားသည်။ ဘယ်လောက်ထိ ကံဆိုးလည်း မမေးပါနှင့် … ဆိုင်ဆောက်ရန် ဝါးလုံးပင် ရှာဝယ်လို့ မရတော့။ ဒါဆိုလည်း ရတာကို အရင် လုပ်ကြမည်။ ညနေ ကိုစိုင်းနောင် ရောက်လာတော့ ဝက်သားပြုတ်ဖို့၊ ဓါးကိုင်ဖို့ အတွက် လုပ်ပေးနိုင်မည့် သူကို စမ်းချောင်း အနှံ့ လိုက်ရှာကြသည်။ ကံက ဘယ်လောက်ထိ ကောင်းနေလဲ ဆိုတော့ ခါတိုင်း ဘယ်အချိန်သွားသွား တွေ့နေကျ ဆိုင်က ကိုယ်လည်း လိုက်ရှာရော အစအနတောင် ရှာမရတော့ .. နေရာပြောင်း သွားသည်။ ဒီလိုနဲ့ နောက်နေ့ ခရီးသာ ထွက်လာခဲ့ရသည်။ စိတ်က မဖြောင့်။ ဆိုင်ဖွင့်ဖို့ ဘာမှအဆင်မပြေသေး။
စကားစပ်၍ ပြောရဦးမည်။ ကံများ ဆိုးမယ့်ဆိုးတော့ ကောင်းကွက် ရှာမရအောင်ကို ဆက်တိုက် ဆိုးသည်။ အသေးအဖွဲ လေးတွေရော .. အကြီးကြီး တွေရော။ စပြီး အဆင်မပြေ တာကတော့ ခုနက ပြောခဲ့သည့် အတိုင်း .. ရန်ကုန် ရေကျော် ပွဲဈေးမှာ ဈေးရောင်းမည့် ကိစ္စကနေ စတာဖြစ်၏။ အဲဒါက ရန်ကုန်မှာ မနေခဲ့ … နယ်ကို သွားသည်အထိ ကပ်ပါလာသည်။ နယ်ရောက်တော့ နေ့လည် နေ့ခင်း မန်ကျည်းပင် အရိပ်အေးအေးအောက် အိပ်နေတုန်း ဆိတ်က မျက်နှာပေါ်တက်၍ လျှာနှင့်လျက်သည်။ နယ်ကနေ ရန်ကုန် ပြန်လာတော့ သူရဿဝါတို့ ငှားလာသည့် ကားက မှောက်မလို ဖြစ်တာ သေဖို့ .. သီသီလေး။ နယ်ကနေ ရန်ကုန်ကို လှမ်းပြီး ဈေးရောင်းသည့် အခြေအနေ လှမ်း၍ ဖုန်းဆက် မေးတော့ အားရစရာ။ ပထမရက်က ဆိုင်ထွက်ဖို့ အခက်အခဲတွေ ရှိ၍ နှစ်သောင်းဖိုး ရောင်းရသတဲ့ .. ဒုတိယ ရက်ကျတော့ ရောင်းကောင်းမည် ကြံတော့မှ ညကိုးနာရီလောက် မိုးရွာလာ၍ ဆိုင်သိမ်းရသတဲ့။ အောက်ပြည် အောက်ရွာမှာ ပိုက်ဆံရှာရ အတော်ခက်မှန်း အခုမှ သိသည်။ ဒီကြားထဲ ပုဇွန်တောင် ဂီတအစည်းအရုံးက ရေကျော်ပွဲမှာ အငြိမ့်ကပေးဖို့ သူရဿဝါတို့ အဖွဲ့ကို ငှားထား ပြီးမှ ပွဲပါမစ် မကျဟုဆိုကာ ကရမည့်နေ့ကျမှ ပွဲဖျက်သည်။ စရံငွေလည်း ကြိုမယူ ထားမိတော့ ပွဲကဖို့ နယ်ကနေ အသည်းအသန် ပြန်လာ ရတာ အကုန်မော သွားကြ၏။ ကံက ဆိုးပြီဆို အဲသည်လို ဆက်တိုက် ဆိုးတာ။ [ အဆုံးအထိ ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန် ]
သူရဿဝါတို့ ကွန်ပျူတာ၊ အင်တာနက် စသင် ခဲ့တုန်းက တစ်ခုခုကို တော်ရုံနှင့် မတတ်လျှင် ကိုယ့်ကိုယ်ကို စိတ်တိုရသည်။ မတတ်မှာ စိုးရိမ်စိတ်နှင့် လုပ်သည့်အခါ Mouse ကိုင်တာ အဆင်မပြေ၊ စာရိုက်တာ အဆင်မပြေ၊ ကွန်ပျူတာ ဖွင့်တာ အဆင်မပြေ၊ အဆင်မပြေခြင်း များစွာနှင့် နပမ်းလုံးခဲ့ရ၏။ အော် … လိုက်လေဝေးလေ ပါလား။ ကိုယ်ပဲ ဥာဏ်မမှီ လို့ပဲလား။ မခံချင်စိတ်နှင့် ကြိုးစားမိသည်။ စိတ်ထဲ သေချာ ကြိုးစားလိုက်လို့ ဒါတွေအကြောင်း နားလည်သွားရင် အေးဆေး ဖြစ်ပြီ .. တွေးမိ၏။ တကယ် အားကြိုးမာန်တက် ကြိုးစားပါသည်။ သို့သော် .. ဝဋ်ကြွေးကြမ္မာ မမြင်သာ ဆိုသလိုပေါ့ … မတတ်ခင်ကထက် ပိုပိုဆိုးရွားသော လိုက်လေဝေးလေ ကိစ္စကို ကျွမ်းကျင် တတ်မြောက် သိရှိလာသော အခါမှပင် ပို၍ လှလှပပ ခံစားရလေတော့သည်။ ကွန်ပျူတာ စသင်တုန်းက Windows XP ပဲ ရှိသေးသည်။ ကိုယ်ကလည်း ဘာမှမသိ နုံနုံအအ ဆိုတော့ XP နှင့်ပင် တစ်သက်လုံး ပြီးရမည် ထင်ခဲ့သည်။ Windows Version အသစ်တွေ ဘာတွေ ဘာမှမသိ။ XP နှင့် Familer ဖြစ်အောင် အသေအလဲ ကြိုးစားခဲ့သည်။ ကဲ … အချိန်လည်း ကြာလာပြီ။ XP လည်း သိပြီ။ ကွန်ပျူတာ အကြောင်းလည်း အကောင်းအဆိုး သိပြီ .. ဆိုသော အချိန်တွင် Windows Vista တို့၊ Windows7တို့ မရှေးမနှောင်းတွေ ပေါ်လာကြသည်။ ဘာလုပ်ရမလဲ။ မတတ်နိုင် အတော်များများ … Vista ကို လက်လွှတ်ပြီး Windows7နှင့် အသားကျအောင် ကြိုးစား ကြရသည်။ ပိုဆိုး တာက ကွန်ပျူတာ အကြောင်း လုံးစေ့ပတ်စေ့ မသိသူ ဆိုလျှင်တော့ ဒီ Window တွေ ကိစ္စက သူ့အတွက် သိပ်အရေး မကြီးဘူးပေါ့။ ဟုတ်တယ်လေ … ဘယ်ဝင်းဒိုးကို သုံးသုံး ကွန်ပျူတာပွင့်ပြီး အလုပ်လုပ်လို့ ရဖို့ပဲ အဓိက မဟုတ်လား။ အခုတော့ ကိုယ်က သေချာ လေ့လာထားလို့ သေချာသိတော့ XP ထက်7က သာလွန်သည့် အချက်တွေ အများကြီးကို သိနေကြသည်။ သိနေတော့ XP ကို ပစ်၍7ကို သုံးချင်ကြသည်။ XP နှင့်7ကြားထဲ အသုံးပြုပုံ ကွဲလွဲချက် အချို့ကို ရှာဖွေ သင်ကြား ကြရသည်။ ပြန်လေ့လာ ကြရသည်။ စိတ်ပင်ပန်း လူပင်ပန်း ဖြစ်ကြရသည်။ ထားတော့ … Microsoft ၏ ပြတင်းပေါက် များမှခွဲထွက်၍ Open Source ဖြစ်သည့် Ubuntu နှင့် ရင်းနှီး လာကြတော့ ပိုဒုက္ခ ရောက်တော့သည်။ ဗိုင်းရပ်စ်ရန်မှ ကင်းဝေးသည့် Ubuntu ကို ပြောင်းလည်း သုံးချင်သည်။ သို့သော် In-touch ဖြစ်ဖို့က အချိန်ပြန်ပေး ရမည်။ အလုပ်မအား ကြရသည့် ကြားထဲမှ ဒါကို အစကနေ ပြန်လေ့လာ နေကြဖို့ မလွယ်။ တကယ့်ကို လိုက်လေ ဝေးလေ ဖြစ်ကြရသည်။ ဒီတစ်ခုထဲလား .. ဆိုတော့ မဟုတ်ပါ။ ရှိသေး၏။ သူရဿဝါတို့ စပြီးသုံးတုန်းက ကွန်ပျူတာတွေက မော်ဒယ်နိမ့်သည်။ နောက်ပိုင်း ပေါ်လာလိုက်တာ .. Pentium တွေရော၊ Core i3, Core i5, Core i7 စသည်ဖြင့်။ တစ်ခုပေါ်လိုက် လိုချင်လိုက် .. အဲဒါလေး သုံးလို့မှ စက်တောင် ဖုန်မတက်သေး … ထပ်ပြီး ပေါ်လိုက်၊ လိုချင်လိုက်နှင့်။ သံသရာက မဆုံးတော့။ [ အဆုံးအထိ ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန် ]